मनोरन्जन Archives | Page 44 of 45 | Daily State News
“सुस्मिता” लिएर आउंदै गीतकार सरोज चेम्जोङ,तिम्रै हातको सिन्दुर ‘को भिडियो युट्युबमा
https://www.youtube.com/watch?v=qfNa5_esUvwगित संगीतको दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्दै एक पछि अर्को गर्दै गितकारहरुको जन्म भैरहंदा उदयमान गितकार सरोज चेम्जोङ पनि नेपाली संगीतिक बजारमा देखा परेका छन। छ वटा गितहरु रहने ‘सुस्मिता’ एल्बमको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र केही गीतहरुको म्युजिक भिडियो समेत बनिसकेका छन । एल्बममा राजेश पायल राई, मेलिना राई, प्रस्ना साक्या, रामकृस्न ढकाल ,सुनिता थेगिम, नरेस लिङ्देन […]
परिणितीलाई दिएनन् दर्शकले साथ
नायिका परिणिती चोपडा निरन्तर चलचित्र असफल भएपछि लामो समय खाली बसिन् । दर्शकले नरुचाएपछि उनले आफ्नो तौल घटाइन् । परिणितीको फिगरको खुबै चर्चा भयो । लामो ग्यापपछि परिणती अभिनित चलचित्र ‘मेरी प्यारी बिन्दु’ रिलिज भयो । शुक्रबारबाट रिलिज भएको यो चलचित्रबाट उनले फेरि सफलताको झण्डा गाड्ने विश्वास थियो । तर, उनले सोचे जस्तो भएन । […]
रंगकर्मी विक्रमको तनहुँमा हत्या
रंगकर्मी विक्रम परियारको अज्ञात समुहले हत्या गरेको छ । तनहुँ स्थायी घर भएका परियार स्थानिय तह निर्वाचनमा मतदानका लागि तनहुँ गएका थिए । भोट खसालेर घर नजिकै घुम्न निस्किएका परियारलाई अज्ञात समुहले आक्रमण गरेको थियो । हाल उनको शब दमौली अस्पतालमा राखिएको छ । आक्रमणकारीको पहिचान भएको छैन । विभिन्न रेडियो, नाटकलगायतमा अभिनय गरेका परियारले […]
नायिका करिश्मा मानन्धरले काठमाण्डौबाट मतदान गर्न नपाएपछि पति विनोद मानन्धरमाथि आक्रोश पोखेकी छिन् । नयाँ शक्ति नेपालकी केन्दि्रय सदस्य करिश्माले पति विनोद मानन्धरले आफूहरुका लागि गरेका हरेक कुरालाई ‘कृपा’ मान्नुपर्ने ? भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन्-‘विनोद, तिमी एउटा परिवारमा बस्छौ र परिवारका हरेक सदस्यहरुको आफ्नो अधिकार र चाहना हुन्छन् […]
मनीषा कोइराला भन्छिन्- ‘जन्मजात विद्रोही म’
अभिनेत्री मनीषा कोइराला बलिउडकी उम्दा अभिनेत्रीमध्ये एक हुन्। एक भारतीय मिडियासँग उनले गरेको कुराकानीः करिअरको उत्कर्षमा पुगेका बेला तपाईंले फिल्म लाइन छोड्नुभयो, किन? मैले यसो गर्नुका पछाडि केही व्यक्तिगत कारण थिए। त्यतिखेर मलाई क्यान्सर लागेको थाहा पाएकी थिएँ। मैले अझ ठूलो लडाइँ लड्नुपर्ने भयो। फेरि, धेरै काम गरिसकेकाले म थाकेकी पनि थिएँ। एक पटक मैले […]
बैशाख ३० – क्यानाडेली पपस्टार जस्टिन बीबरको विषयमा भारतमा निकै चर्चा थियो । उनी कन्सर्टका लागि पहिलो पटक भारत गएका थिए । उनी भारतमा नआउन्जेल मिडियाहरुले उनीसँग सम्बन्धित विभिन्न चर्चा परिचर्चा गरिरहे । उनका सकारात्मक कुराहरु धेरैजसो सार्वजनिक भए तर उनी भारतबाट निस्किएलगत्तै उनका नकारात्मक कुराहरु धेरै बाहिरिनि थाले । उनीसँग दर्शकहरु पनि निकै रुष्ट […]
साम्राज्ञीका नयाँ हिरोको कस्तो क्रेज, पाँच तारेमा भेट्दा रोए यूवती फ्यान
दर्जनौ चलचित्र वा भिडियोमा काम गर्दा पनि कलाकारलाई क्रेज बनाउन गाह्रो छ । बाटोमा हिड्दा पनि धेरै कलाकारलाई दर्शकले वास्ता गर्दैनन् । तर, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका एक नव-नायकको क्रेज देखेर भने तपाई छक्क पर्नुहुनेछ । चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’बाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गर्न लागेको धिरज मगर एक चर्चित ब्लगर हुन् । आज […]
कलाकार क्षेत्रीलाई बेलायतबाट दुई लाख पचास हजार सहयाेग
कलाकार दिपक क्षेत्रीको स्वास्थ्य उपचारका लागि बेलायतबासी नेपालीहरूले दुई लाख पचास हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन । बेलायतबासी नेपाली चलचित्रका नायक ध्रुव दत्तको पहलमा यो रकम बेलायतमा संकलन गरिएको थियो । रकम बिहिबार क्षेत्रीकै निबासस्थान काठमाण्डौको डिल्लीबजारमा सन्चारकर्मी राजन घिमिरे र नाट्यकर्मी सनमकुमार बैरागले सम्युक्त रूपमा हस्तान्तरण गरे । रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रबासी नेपालीहरूको […]
यतिबेला निर्देशक दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरिरहेको दोश्रो चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’को धमाधम छायांकन भैरहेको छ । चलचित्रको शुभसाइत समारोहमा नायिका प्रियंका कार्की उपस्थित थिइनन् । तर, उनी अहिले धमाधम यो चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त छिन् । नेपालकी नम्बर १ नायिका कार्कीको ‘छक्का पन्जा २’मा कस्तो गेटअप होला भन्ने तपाइलाई लागेको हुनसक्छ ? प्राप्त भएको चलचित्रको छायांकनका […]
चलचित्र ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’मा एकसाथ काम गरेपछि नायिका रेखा थापा र नायक आर्यन सिग्देल अलग भए । यो चलचित्रमा काम गर्दासम्म रेखा र आर्यनलाई दर्शकले निकै रुचाए । ‘किस्मत, हिफाजत, कसले चोर्‍यो मेरो मन’मा काम गर्दा सम्म रेखा र आर्यन दर्शकको रोजाइका जोडी बनिसकेका थिए । तर, चलचित्र सफलतासँगै दुबैमा स्टारडमको घमण्ड बढ्न थाल्यो […]
बर्षालाई ‘हेल्लो हाइ’ भन्ने को हो ?
गायक शिवकुमार चौधरीको भावना एल्बममा समावेस रहेको “हेल्लो हाइ भन्नू केवल वोल्ने एउटा वाहना हो”वोलको गीतको म्यूजिक भिडियो भर्खरै युट्यूव मार्फत शार्वजनिक भएको छ। गीतकार प्रकाश सुवेदीको शव्द र कल्याण सिंहको संगीत रहेको उक्त गीतमा सामाजिक सञ्जाल या फोन मार्फत युवा युवतीहरु एक अापसमा अाकर्सित हुने र अन्तत: प्रेम सम्वन्धमा गाँसिने कुरा गीतकार सुवेदीले अाफ्नो […]